Ny mpanamboatra sy ny mpaninjara karbon-bozaka vita amin'ny vatosoa - Ny orinasa Shina - Cixi Wenap International Trading Co., Ltd
Home > Products > Fiarovan-tena sy fanakam-basy > Fananganana fananganana fanorenana > Fiarovana amin'ny kodiarana vy
Product Introduction of anchors of carbon steel wedges
Ny vatofokofoko amin'ny kofehy vita amin'ny plastika dia tsy manana bahan-tombo-kase ho an'ny fanonganam-pandrika ampiasaina amin'ny fampiasana vatosoa matevina. Ny vatofantsika vita amin'ny kofehy vita amin'ny kiran-dandy dia misy 8 metatra sy maromaro ary maro no mipetraka amin'ny famakiana ny vozony. Ny vatofantsika karbonina misy vatosoa vita amin'ny vatosoa dia amboarina amin'ny karbôna ary antsoina koa hoe vatofokofoka na tsangambato.
Product Parameter ny vatofantsika amin'ny vatofokofon'ny vatofantsika
GB, DIN, ISO, ANSI / ASTM, B7, BS, JIS, tsy marim-pototra dia azo atao araka ny fepetra takinao.
Kofehy vita amin'ny karbaona, mibontsina ny vy SS304, A2, SS314, A4.
BZP, YZP, Lemaka, tapa-tavoahangy mafana
Ankoratory bolt + klina fanindriana clip + tsotra fiara + hex nut
Boky box / pallet
Ny OEM / ODM dia azo jerena eo amin'ny sary sy ny sarin'ny mpanjifa.
Product Feature sy ny fampiharana ny vatofantsika vy
Standard:Ny fitsipika rehetra dia misy tahiry, ny tsy fanarahan-dalàna dia azo atao araka ny fangatahanao.
savaivony:M6 hatramin'ny M30
Length:From 40 to 360mm
Fampiasana:Ny rafitra metaly, ny profiles, ny gorodona, ny takelaka takelaka, ny fonosana, ny bala, ny rindrina, ny milina, ny balam-paty, sns.
Taridalana momba ny vokatra vita amin'ny vatofantsika vita amin'ny kodiarana vy
Packaging Details:TOKONY MALAGASY + CARTON DIA AMINAREO ORINASA PAOLY.
FOR SHIPPING:AVY AMIN'NY SEA, NA AIR, LOGISTIC COMPANY, ETC.
Hot Tags: Fanamboaran-trano vita amin'ny vatosoa vita amin'ny vatosoa, Chine, mpamokatra, mpamatsy, orinasa, vita avy any Shina, mividy, mividy, maimaim-poana, an-tapitrisany, haingana, vidin'ny vidin-tsolika,